ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ငတ်မွတ်နေလို့ တောင်းခံလိုက်တဲ့ ဆုအိမ့်စံ - Cele Connections
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ငတ်မွတ်နေလို့ တောင်းခံလိုက်တဲ့ ဆုအိမ့်စံ
ဆုအိမ့်စံကတော့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတစ်ယောက်လို့ ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရည်လေးနဲ့ ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလေးကလည်း ပုရိသထုကြီးကို စွဲမက်စေသူပါ။ ဆုအိမ့်စံဟာ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တာနဲ့အမျှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ သရုပ်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Mrtv-4မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ Dancing with the Stars Myanmar အကပြိ်ုင်ပွဲမှာလည်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အကအလှတွေနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆုအိမ့်စံရဲ့ အချစ်ရေးဟာ လတ်တလောကာလတွေမှာ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ပြီး ဂယက်ထမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ မင်းသားသူရိယဘက်က တစ်ဖက်သတ်စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှုကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်လည်း သူမတစ်ယောက် နာကျင်မှုနေ့ရက်တွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်းဖြတ်ကျော်နေရပါတယ်။ အချစ်ရေးကံခေတဲ့ ဆုအိမ့်စံကတော့ မကြာသေးခင်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ “ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေး တစ်ခုခုပြောခဲ့ပေါ့” …. ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို မျှဝေခဲ့တာကြောင့် ချစ်ပရိသတ်တွေက ကရုဏာသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီပို့စ်လေးရဲ့အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက သူမကိုအားပေးခဲ့ကြပြီး ချစ်စကားလေးတွေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နှလုံးသားရေးမှာ ကျွန်းခံနေတဲ့ ဆုအိမ့်စံတစ်ယောက် နာကျင်မှုနေ့ရက်တွေကနေ အမြန်ဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့ ထပ်တူဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဆုအိမ့်စံလေးကို ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှေ ငတျမှတျနလေို့ တောငျးခံလိုကျတဲ့ ဆုအိမျ့စံ
ဆုအိမျ့စံကတော့ ကိုရီးယားမငျးသမီးလေးတဈယောကျလို့ ဖွူဝငျးတဲ့အသားအရညျလေးနဲ့ ခြောမောလှပတဲ့မကျြနှာလေးကွောငျ့ ပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားနတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့လှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးလေးကလညျး ပုရိသထုကွီးကို စှဲမကျစသေူပါ။ ဆုအိမျ့စံဟာ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတာနဲ့အမြှ ရုပျရှငျဇာတျကားတှမှောလညျး ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပီပွငျပွငျနဲ့ သရုပျနိုငျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ Mrtv-4မှာ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ Dancing with the Stars Myanmar အကပွိုငျပှဲမှာလညျး ရငျသပျရှုမောဖှယျ အကအလှတှနေဲ့ ပါဝငျယှဉျပွိုငျနသေူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဆုအိမျ့စံရဲ့ အခဈြရေးဟာ လတျတလောကာလတှမှော လှုပျလှုပျခတျခတျဖွဈပွီး ဂယကျထမှုတှနေဲ့ ကွုံတှနေ့ရေတာပါ။ မငျးသားသူရိယဘကျက တဈဖကျသတျစစေ့ပျကွောငျးလမျးမှုကို ဖကျြသိမျးခဲ့တာကွောငျ့လညျး သူမတဈယောကျ နာကငျြမှုနရေ့ကျတှကေို ပငျပငျပနျးပနျးဖွတျကြျောနရေပါတယျ။ အခဈြရေးကံခတေဲ့ ဆုအိမျ့စံကတော့ မကွာသေးခငျက သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ “ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့အကွောငျးလေး တဈခုခုပွောခဲ့ပေါ့” …. ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို မြှဝခေဲ့တာကွောငျ့ ခဈြပရိသတျတှကေ ကရုဏာသကျခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီပို့ဈလေးရဲ့အောကျမှာတော့ ပရိသတျတှကေ သူမကိုအားပေးခဲ့ကွပွီး ခဈြစကားလေးတှဆေိုခဲ့ကွပါတယျ။
နှလုံးသားရေးမှာ ကြှနျးခံနတေဲ့ ဆုအိမျ့စံတဈယောကျ နာကငျြမှုနရေ့ကျတှကေနေ အမွနျဆုံးကြျောဖွတျနိုငျပါစလေို့ ပရိသတျကွီးနဲ့ ထပျတူဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ Cele Connections ပရိသတျကွီးကလညျး ဆုအိမျ့စံလေးကို ခဈြတဲ့အကွောငျးလေးတှေ မှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေနဲ့ အမေရဲ့ အပြန်အလှန်မေတ္တာတွေကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်အားကျခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း
“မိခင်ဖြစ်သူကို သတိရနေတဲ့စိတ်လေးတွေကို ခဏမေ့ရင်း ချစ်တဲ့ မိသားစုလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ အပြင်ထွက်လည်ခဲ့တဲ့ ချောရတနာ”